ညစ်ညမ်းသောအတွေးအခေါ်များ (၂၀၁၈)၊ စတီဖင်အေ Wilson၊ MD, MPH - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ညစ်ညမ်း Thoughts (2018), စတီဖင်အေ Wilson က, MD MPH
စတီဖင်အေ Wilson က, MD MPH
အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများကွဲပြားခြားနားပါသည်။ တန်းတူအခွင့်အလမ်းနှင့်ကုသမှုများအတွက်ကိုကျက်စားခုနှစ်တွင်တန်းတူနှင့်အတူတူပင်တွေအကြောင်းစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှု neutering သို့မဟုတ်အသံတိတ်နိုင်ရန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်မကြာခဏလည်းမရှိ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုပိုင်းခြားသိမြင်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီး Potter Stewart က“ …ငါမြင်သောအခါငါသိ၏” ဟုပြောခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကိုသတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဂရိစကားလုံးမှ porn (ပြည်တန်ဆာ) နှင့် graphein (ရေး) ညစ်ညမ်းပထမဦးဆုံးဒါဟာသဘာဝဗေဒထက်ပိုခေါ်ဆောင်သွားသည်နှင့်ပုံနှိပ်, အသံ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောတုံ့ပြန်မှုလှုံ့ဆော်သည်ဟုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုများ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြချက်သို့မဟုတ် display ကိုင်အမြင်အာရုံပစ္စည်းအဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ် 1842.3,4 အတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာထငျရှားလေ များသောအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ။
အိုးကိစ္စရပ်များ၏အတွင်းပိုင်း။ ကျွန်တော်တစ်ဦးခွက်ကိုဆေးကြောသန့်စင်ဖို့လိုတဲ့အခါကျနော်တို့အတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းရေး။ ကျွန်တော်တစ်ဦးခွက်ကိုရဲ့ contents သိရန်လိုပါလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ဒါမှမဟုတ်သို့သှနျးလောငျးခံရဘာကိုစောင့်ရှောက်မည်။
အဘယ်အရာကိုစိတ်ကိုအထဲသို့ဝင်အတှေး, စိတ်နေသဘောထားနှင့်အပြုအမူသက်ရောက်သည်။ အဘယ်ကြောင့်အခြားသူကုမ္ပဏီများ5Super Bowl စဉ်အတွင်းတစ် 30-ဒုတိယစီးပွားဖြစ်များအတွက် $ 2018 သန်းပေးဆောင်မလဲ5ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုအလေ့အထများကျန်းမာရေး-ထိခိုက်အပြုအမူနှင့်သဘောထားများဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြသည်။ ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများလောင်သူကိုအသက်မြီးကောင်ပေါက် 12-17 နှစ်ပေါင်းလုလင်တို့သည်ခုနှစ်တွင်အစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ debut.6 ရှိသည်ဖို့ကပိုများပါတယ်, မြင့်မားသောအတိတ်ညစ်ညမ်းကြည့်အမျိုးသမီးများနှင့်ရန်လိုသော sexism.7 ၏အဆင့်မြင့်ဆီသို့လျော့နည်းသာတူညီမျှသဘောထားနှင့်ဆက်စပ်နေသည်
2013 မှာတော့အားလုံးအင်တာနက်ဒေတာ transfer 30% ညစ်ညမ်းခဲ့များနှင့်ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များ, Netflix, အမေဇုန်နှင့် 8, PornHub အတွက်တွစ်တာ combined.2015 တစ်ဦးညစ်ညမ်း website မှာထက်ပိုပြီးထူးခြားတဲ့ဧည့်သည်များရှိခဲ့ပါတယ် 21.2 ဘီလီယံခန့်လည်ပတ်မှုရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အချက်အလက်များ၏ 75GB တစ်ဦးချင်းစီကဒုတိယထုတ်လွှင့် , ခွက်တွေအများကြီးသို့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးသွန်းလောင်းနေပါသည်ဒါကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 175 သန်း 16GB iPhones.9 ဖြည့်ရန်လုံလောက်သော။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏အကြောင်း 70% -80% male.8,9 ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နေကြသည်။ လိင်ကွဲညစ်ညမ်းကျော်လိင်တူချင်းများအတွက် preference (ယောက်ျား၏ 21.3% vs အမျိုးသမီးများ၏ 1.8%) အမြိုးသမီးမြားအကြားပိုမိုမြင့်မားကြောင်း, သူတို့အလိုမရှိအမှုအရာကိုစောင့်ကြည့် (သို့မဟုတ်မတတျနိုငျသ?) စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ပြုပါ 14% (လူတို့တွင်ပိုပြီးဘုံဖြစ်ပါသည် ယောက်ျား၏ 70% vs အမျိုးသမီးများ) .10
ညစ်ညမ်း, အားပေးအားမြှောက် ပို. , ဒါမှမဟုတ်ကဲ့သို့သောအယူအဆများ validates: အမျိုးသမီးများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုပါ၏ လူတိုင်းကအမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးလိင်လို; အမြိုးသမီးမြားကိုသူတို့လုပ်ပေးသို့မဟုတ်လိင်သူတို့ကိုပွုပါပွီဆန္ဒရှိနေကြသည်အရာကိုတန်ဖိုးထားကြသည်; အမျိုးသမီးတွေလိင်အဘို့ ဖြစ်. , နှင့်အမျိုးသမီးဆုဖလားဖြစ်ကြသည်။ အများကြီးညစ်ညမ်းယောက်ျားဆီက input သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အမျိုးသမီးမိတ်ဖက်များအတွက်နှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲအမြဲအကျိုးရှိသောသို့မဟုတ်တပ်မက်လိုချင်သောအဖြစ်သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးစိုးနီးပါးတည်းဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲသို့မဟုတ်ထိန်းအကွပ်မဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဖော်ပြတွေ့ရမယ်။
ဇန်နဝါရီလ 2018 ခုနှစ်တွင်ဒေါက်တာလောရင့်ဂျီ Nassar အားလုံးသူလိင်ခုနစ်ခုမိန်းကလေးငယ်များအလွဲသုံးစားလုပ်ဖို့အပြစ်ရှိအသနားခံပေမယ့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲသို့မဟုတ် treatments.40 ပေး၏ဟန်ဆောင်အောက်မှာအသက် 175 နှစ်ပေါင်းကဲ့သို့ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များ molesting များအတွက်ထောင်ဒဏ် 6-11 နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်, 160 ထက်ပိုပြီးဒီစီရင်ချက်ချသူပြီးသားကလေးက pornography.11 များအတွက်နိုဝင်ဘာလ 60 အတွက်လက်ခံရရှိခဲ့ 2017 နှစ်ပေါင်းများအပြင်၌ရှိ၏ horror.11 သူတို့ရဲ့ပုံပြင်များနေရသည်မှရှေ့ဆက်လာကြပြီ
လွန်ခဲ့သောနှစ်ကအများကြီးအဘို့, အမျိုးသမီးဆန့်ကျင်လူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်မခံနိုင်သောအပြုအမူ၏စွပ်စွဲချက်တစ်ခုစီးရီးရှိခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်မခံနိုင်သောအပြုအမူ, စကားမှမလိုချင်တဲ့ထိထိမိမိမှအတင်းအဓမ္မမုဒိမ်းမှုအထိအသစ်အချည်းနှီးဖြစ်၏။ လူနာနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇဆွေးနွေးမှုများကိုသွန်သင်ပြီ။ ဘယ်လိုအရာတစ်ခုခုဤမျှကာလပတ်လုံးရပ်တည်မှုနှင့်လူသိများထိုကဲ့သို့သောပူသတင်းဖြစ်လာသလဲ ငွေရတတ်သောသူနှင့်အစွမ်းထက်ကိုထိခိုက်ကြောင်းဖြစ်ရပ်များကိုပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရ။ ကနဦးလူတစ်ဦးက "ညာဘက်" အကြောင်းတရားများနှင့်ပြည်သူများကိုထောက်ခံလျက်, "ညာဘက်" အမှုအရာကပြောပါတယ်သူတစ်ဦးထင်ရှားတဲ့, ချမ်းသာကြွယ်ဝဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းထုတ်လုပ်သူခဲ့စွပ်စွဲခဲ့သည်။ သူ၏ deplorable အပြုအမူ၏အတိုင်းအတာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်မခံနိုင်သောအပြုအမူသည်သူ၏သားကောင်များအများအပြားပေါကြွယ်ဝခဲ့ကြသည်များကြား, ထင်ရှားတဲ့, အဖြူအမျိုးသမီးတွေတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အနုတ်လက္ခဏာအများပြည်သူတုံ့ပြန်မှုများနှင့် backlash.12,13 foment ရန်လိုအပ်သောအလွှာနှင့်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ပေးကြောင်း, တီထွင်ခဲ့တယ်အရုပ်ဆိုးခဲ့ကြပေမယ့်
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတန်းတူဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဧကန်အမှန်တူညီနေကြသည်မဟုတ်: လိင်-တိကျတဲ့နှုန်းထားများနှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်မခံနိုင်သောအပြုအမူ, အလွဲသုံးမှုနှင့်ချေမှုန်းရေး၏ directionality သတိပေးချက်များဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဦးကထပ်တူထပ်မျှအမှုအရာ, သို့သော်, ညီတူညီမျှ, မှတ်ကုသနှင့်တန်ဖိုးထားခံရနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဒီတစ်ခုထက် ပို. ကလေးကအတွေ့အကြုံနှင့်အတူပြည်သူ့: တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောအားသာချက်များ, အားနည်းချက်များကိုလိုအပ်ပါသည်, လက်ဆောင်, ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ဆောင်ခဲ့၏နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးချစ်ပြီးအညီအမျှတန်ဖိုးထားကြသည်။
ဤပစ္စုပ္ပန်, ပေါ်ပင်, ကျဆင်းခဲ့ရခြင်းကမ္ဘာ၏ဖြစ်ရပ်မှန်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ခွင်နှင့်လူနာများ၏ကျန်းမာရေးတို့အတွက်ဆေးဝါးအတွက်အလားအလာရှိသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်များ၏ကျန်းမာရေးများအတွက်ဤမျှကာလပတ်လုံးစံစံသည်, ပြုလုပ်မရရှိစအဘို့အခွင့်အလမ်းများကိုတန်းတူညီမျှဖြစ်သကဲ့သို့, တဦးတည်းကရရှိသွားတဲ့သို့မဟုတ်တငျပွဘယ်လိုကိုအလွန်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ သိပ်မကွာခဏကလူတူခြေရာနှင့်ဒုံးကျည်သွားလမ်းများတွင်အောက်ပါအဓိပ္ပာယ်ကိုအဖြစ်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုအောက်ပါ misconstrue ။ အချို့ကချဲ့မနေတော့ပိုရှည်; အချို့သောပိုကြီးခြေ; အချို့သောပိုကြီးတဲ့ကျောပိုးအိတ်ရှိသည် ဖြစ်. , အချို့ထပ်မံအထက်တွင်သို့မဟုတ်အောက်ကလမ်းကြောင်းအပေါ်ကိုစတင်ပါ။
အဲဒီလမ်းကြောင်းကိုအလုံအလောက်စိန်ခေါ်မှုများရှိပါတယ်; လိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအပိုဆောင်းမဖြစ်သင့်ပါတယ်။ , ကြင်နာ Be ပညာရှိသဖြင့်, နားထောင်ပါ။ သငျသညျကုသခံရချင်သို့မဟုတ်သင့်မိခင်သို့မဟုတ်သမီးကိုလက်ခံမလားလမ်းက ""? သငျသညျဆိုသညျကားသို့မဟုတ်သင့်မိဘများသို့မဟုတ်သားမွေးပစ္စုပ္ပန်နှင့်အတူ "အဲဒီအရာ" ပြုပါမလား? အမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုသို့မဟုတ်အပျက်သဘောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကြွလာလြှငျ, ပြတ်တောက်, တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းသို့မဟုတ်အပြစ်တင်စရာမလိုဘဲနားထောင်ပါ။
လူမှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းအတွက်ညစ်ညမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာများ၏ကျန်းမာရေးများအတွက်အသုံးဝင်သောသုံးသပ် biopsychosocial သတင်းအချက်အလက်လိုက်လျောနိုင်ပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သမားအထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်စောင့်ရှောက်မှု, ခံစားချက်မမှန်ခြင်း, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပိုမိုမကြာခဏညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုမေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာအမျိုးအစားဖြစ်သနည်း ဒါဟာလူထုကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်သူတို့အပျေါမှာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ဘောင်ရှိသမြှသောအမှုအရာဆေးရွက်ကြီး, အရက်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သေနတ်ထက်ပိုနေရာအနှံ့ပါပဲ။ တစ်ခုမှာစည်းမျဉ်းသာဓကလွယ်ကူမိဘများသို့မဟုတ် cyberbarriers စိုက်ထူရန်ဒါရှိုမည်သူမဆိုအဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါဖို့ ".xxx" ဖြစ်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များလိုအပ်မှဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်ထပ်အဘယ်သူ၏အဓိကဆရာမလိင်နှင့်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေရဲ့ပညာရေးညစ်ညမ်းခဲ့ (re) စိတ်ဓါတ်များနှင့်အပြုအမူအပေါ်ညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်သုတေသနနှင့်အဘို့အအရင်းအမြစ်များကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ညစ်ညမ်းလူငယ်များလိင်စဉ်းစားပုံကိုသာသက်ရောက်သည်နှင့်, လူကိုစဉ်းစားပုံကိုများနှင့်ချဉ်းကပ်လူအများစုဟာအရက်သမားဖြစ်လာစရာမလိုဘဲအရက်သေစာမသောက်ရ women.14 ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်သူကလူအများစုဟာအဆုတ်ကင်ဆာမရကြဘူး, ဒါပေမယ့်အဆုတ်ကင်ဆာရသူကလူမျိုး၏ကျယ်ပြန့်အများစုစီးကရက်သောက်သည်။ မည်သို့ပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်ကိုရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်အားထုတ်မှုအတွက်ကျနော်တို့ suboptimal ၏ရလဒ်များကိုတားဆီးများနှင့်ဆက်ဆံပါကကူညီမှကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်ကြောင်းအပြုအမူသည်ဤနှင့်အခြားဒေသများရှိအောင်ပင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်စေဆုံးဖြတ်ချက်အရေးယူ။ ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးတစ်ခုစစ်တပ်ကိုမရမရစေခြင်းငှါ, ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဆိုးလုပ်ရပ်များ၏လက်ခံအုပ်ချုပ်ရသောသဘောထားများအုပ်ချုပ်ရသောအတှေးအအုပ်ချုပ်သောစိတ်ကို, ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါဟုမဆိုလိုပါ။ ဒါကြောင့်အရွယ်အစား, လောင်း၏နှုန်းမှာ, ဒါမှမဟုတ်ဝစွာ၏နှုန်းမှာအဘို့အ Be အချို့ခွက်အခြားသူများထက်သူတို့ရဲ့ content တွေကိုလျှံဖို့ပိုများပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်ကိုနှင့်အစ်မရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်ဖို့ပိုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Gewirtz P. တွင်: "ငါမြင်သောအခါငါသိ၏။ " (တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီး Potter Stewart ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှု) ယေးလ်ဥပဒေဂျာနယ်။ ၁၉၉၆ ဇန်နဝါရီ။ https://www.thefreelibrary.com/On+%22I+know+it+when+I+see+it.%22+(Supreme+Court+Justice+Potter+Stewart’s…-a017945685။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2018 ။
အိုးထိန်းသမား Stewart က။ https://www.oyez.org/justices/potter_stewart ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2018 ။
အောက်စဖို့အင်္ဂလိပ်အဘိဓါန်အွန်လိုင်း၌တည်၏။ https://en.oxforddictionaries.com/definition/pornography။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2018 ။
Merriam-Webster.com ၌တည်၏။ https://www.merriam-webster.com/dictionary/pornography။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2018 ။
Zarett EJ ။ Super Bowl ကြော်ငြာ 2018 အတွက်ဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ? အားကစားသတင်း။ ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2018 ။ http://www.sportingnews.com/nfl/news/super-bowl-2018-how-much-do-super-bowl-commercials-cost-nbc-coca-cola-hyundai/1qap05f9qd6hd1kn2i9lahwlk3။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2018 ။
Collins သည် RL, Elliott MN, Berry SH ။ ရုပ်မြင်သံကြားမှလိင်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုစတင်သည်။ ကလေးအထူးကု။ 2004; 114 (3): e280-e289 ။
Hald GM, Malamuth NN, Lange T. Pornography နှင့်လိင်ကွဲလိင်အရလိင်အရလိင်အရသဘောထား။ J Commun ။ 2013; 63 (4): 638-660 ။
Huffington Post က။ porn ဆိုဒ်များ Netflix, Amazon နဲ့ Twitter ကိုပေါင်းစပ်ထက်တစ်ဦးချင်းစီတစ်လပိုပြီးဧည့်သည်များအရ။ ,42013 နိုင်ပါစေ။ https://www.huffingtonpost.com/2013/05/03/internet-porn-stats_n_3187682.html။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2018 ။
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး Times က။ PornHub "မီယာ Khalifa ကို", "Kim Kardashian က" နှင့် 2015 မှာ "လိင်တူချစ်သူ" လူကြိုက်အများဆုံးဗြိတိန်ရှာဖွေမှုများကိုဖော်ပြသည်။ http://www.ibtimes.co.uk/pornhub-reveals-mia-khalifa-kim-kardashian-lesbian-most-popular-uk-searches-2015-1536902။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2018 ။
Knibbs K. ဒီစစ်တမ်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကွဲပြားခြားနား porn ရှုမြင်ပုံကိုပြသသည်။ http://time.com/9051/this-survey-shows-how-men-and-women-view-porn-differently/။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 7, 2018 ။
Cacciola S က, Mather V. လာရီ nassar စီရင်ချက်ချ: "ကိုယ့်သင့်ရဲ့အသေခံရမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ " ဟု New York Times ကို။ ဇန်နဝါရီလ 28, 2018 ။ https://www.nytimes.com/2018/01/24/sports/larry-nassar-sentencing.html။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2018 ။
ဗစ်တာဃဘယ်လို Harvey weinstein ပုံပြင်ဖှငျ့။ New York Times ကို။ အောက်တိုဘာလ 18, 2018 ။ https://www.nytimes.com/2017/10/18/business/harvey-weinstein.html။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2018
ငါ့ကိုအရမ်းလပ်ြရြားမြ။ ဝီကီပီးဒီးယားက The အခမဲ့စွယ်စုံကျမ်း။ ဖေဖော်ဝါရီလ 12, 2018 ။ https://en.wikipedia.org/wiki/Me_Too_movement။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2018 ။
ဆယ်ကျော်သက်အွန်လိုင်း porn ထံမှသင်ယူနေကြသည်ဘယ်အရာကိုဂျုံးစ်အမ်။ New York Times မဂ္ဂဇင်းရဲ့။ ဖေဖော်ဝါရီလ 7, 2018 ။ https://www.nytimes.com/2018/02/07/magazine/teenagers-learning-online-porn-literacy-sex-education.html။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 8, 2018 ။